Are You Human? – Gold Channel Movies
Jun 04, 2018 KBS2
9.5 68 votes
Nam Shin ဟာ PK Group ရဲ့ တတိယမျိုးဆက် အမွေဆက်ခံသူပါ။ ရုပ်ရည်ချောမောပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသူတစ်ဦးပါ။ သူ့မှာ Seo Ye Na ဆိုတဲ့ အမိုက်စား ဇနီးလောင်းလေးရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ Nam Shin ဟာ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်ပြီး Coma ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
လူလုပ်မှတ်ဉာဏ်တုလုပ်ငန်းမှာ ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Nam Shin ရဲ့အမေ Oh Ro Ra ဟာ သူ့သားရဲ့ရာထူးနေရာကို ကာကွယ်ပေးချင်ခဲ့ပါတယ်။ Nam Shin သူငယ်ချင်းနဲ့ Ji Young Hoon တို့ အကူအညီနဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်များပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ Nam Shimn III ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်ကို ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။
Kang So Bong ကတော့ Nam Shin III ရဲ့ သက်တော်စောင့်ပါ။ အပြင်ပန်းက ခက်ထန်တဲ့ပုံပေါက်ပေမယ့် ကြင်နာပြီး ဂရုစိုက်တတ်သူပါ။ Nam Shin III ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး လူသားလို ဘယ်လိုပြုမူရမလဲဆိုတာပါ သူက ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ တဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးပြီး စက်ရုပ် Nam Shin မှာ စိတ်ခံစားချက်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့….
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ အပတ်စဉ် KBS2 channel မှ တနင်္လာ အင်္ဂါနေ့တိုင်း ထုတ်လွှင့်ပြီး အပိုင်း ၁၆ ပိုင်း ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
First air date Jun 04, 2018
Last air date Jun 05, 2018
1Season 1 Jun 04, 2018
Episode 4Jun 05, 2018
Episode 5Jun 11, 2018
Episode 6Jun 11, 2018
Episode 7Jun 12, 2018
Episode 8Jun 12, 2018
Episode 9Jun 18, 2018
Episode 10Jun 18, 2018
Episode 11Jun 19, 2018
Episode 12Jun 19, 2018
Episode 13Jun 25, 2018
Episode 14Jun 25, 2018
Episode 15Jun 26, 2018
Episode 16Jun 26, 2018
Episode 17Jul 02, 2018
Episode 18Jul 02, 2018
Shared163 Facebook Twitter
Attack on Titan ( မြန်မာစာတန်းထိုး )